トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Horukon ephezulu sici-ukubona ngokusebenzisa indlela ukubeka
Ngo Horukon bamba, ke kuthiwa zimisiwe division. Pachinko esitolo, uma Uchikome ilitshe yokuthengisa Horukon, futhi ngokukhululekile ukubala izinga ukunciphisa, wena kusho ukulawula yokubhadala.
Isiphathi wenkokhelo is a babeqoqana kusuka ezine ezinhlanu ezimweni ezithile ume, Uma uba isikhathi isethi, wena kuthiwa uhlelo ukuthi inike jackpot. Futhi, iqembu kunqunywa Horukon, lapho likhipha i-jackpot, ROM ye ithoni bekulokhu ukukhetha aqatha.
ithoni base khulula noma ROM ecasukile ithebula ukuma bekulokhu ukuthi kukhona mancane amathuba okuthi kukhethwe. Ngo
, labo hlabelela Horukon bamba kuyinto, onjani ukuziphatha singathanda ukubheka ukuthi yini ukuba Ufake ephezulu isethi lapho ngisukuma ngiyobeka. Ukuze
ukuphakama ukubeka ngesikhathi, avame umbono njengoba enzeka kubonakala esekuficile etafuleni jackpot Kuyaphawuleka ukuthi kukhona into enjalo njengoba ibhola egeleza ngokusebenzisa isiyenezelwe ukusivumela isiqalo. Ball ukuthi kuhanjwe naye baye block evamile, izozama Ochiyo ngezansi maqondana Luhambo.
hit the nail ngaleso sikhathi, noma zingena ngaphansi oshaya ngaso engele ahlukahlukene, wena noma ufake isiqalo. Ngo Ukubuthelela lokushiwo nakwetfulwa lokhu bamba Horukon, sesiye izinto abelwe kule uxhumano transformer. Lapho
Horukon ukunquma iqembu jackpot, i-magnetic amandla izenzo, lizwa ukuthi kukhona umuzwa ukuthi ibhola idwetshwa. Futhi ngaleso sikhathi, Toka kuba nzima ukunciphisa ibhola, uke esawuphakamisa, ezifana ibhola ngokusebenzisa-sihamba kahle.
nezizathu ezenza lokhu kwenzeka futhi siyoba esifanayo njengoba isizathu kuchaziwe ngenhla.
futhi, kuthiwa ezihlukahlukene imihlola ngisho nalapho jackpot kuyofika etafuleni lakho kwenzeka, umbono ezivamile phakathi kwabo, omunye etafuleni eqenjini efanayo, super ukufinyelela futhi Atsurichi okukhulu njalo kwenzeka, kuba into kwenzeka ukuthi bechezuka. Ukuze
ukuphakama ukubeka ngesikhathi, ngayinye enkulu Ri uma kwenzeka, kuthiwa kungenziwa sisuswe ngayinye isilinganiso 9 iziteshi Chang, isethi okusezingeni eliphezulu ngesikhathi, kukhona inkolelo yokuthi ematfuba ukuthi iqembu elifanayo ukunqoba ukuzimisela jackpot kuphezulu.
Ngaphezu kwalokho, lapho isinqumo iqembu elilandelayo sekwenziwe, kodwa abanye abantu ukuthi wehlela phezu ibhola ukuqala sibi kakhulu.
kanye kulungiselelwa okusezingeni eliphezulu ngesikhathi jackpot ilotho kuye kwashiwo kube njalo endaweni, ilotho wena izikhathi 4 ngehora kumele kwenziwe.
noma ngaphezulu, kuba into ezenzeka wamanje Horukon ukuphakama ukubeka ngesikhathi.
Ngale ndlela, sazama ukwethula ejwayelekile into esiye wathi kwakuzothatha Uvame ukuzithola.
Ukuze Horukon bamba indlela nokuziphatha, kubalulekile ukuthi ukholwa iyiphi ngoba kukhona mbono. Ngemva kwalokho, lapho kuphela emakhiyubhi isipiliyoni value practice.